माधव नेपालको गृहनगरमा कुन पार्टीका उम्मेदवार अगाडि ? - ramechhapkhabar.com
माधव नेपालको गृहनगरमा कुन पार्टीका उम्मेदवार अगाडि ?
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको गृहनगर रौतहटको सदरमुकाम गौर नगरपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ । मतगणनाको सुरुवाती परिणाम अनुसार एकीकृत समाजवादीका मेयर पदका उमेदवार सम्भु साहले ३२७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका मोहन यादवले १२८ मत ल्याउँदा लोसपाका उमेदवार तथा निवर्तमान मेयर अजय गुप्ताले ६५ मत प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी ईशनाथ नगरपालिका लोसपाका मेयर पदका उमेदवार कौसलिया देवीले १७१ र नेपाली कांग्रेसका उमेदवार अंजू झाले १४२ मत ल्याउँदा एमालेका उमेदवार तथा निवर्तमान मेयर सन्तोषकुमार मेहताले १०८ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सुरुवाती मतगणनामा माओवादी केन्द्रका प्रमुखका उमेदवार सम्भु सिंहले अग्रता लिएको छ। सिंहले ३५७ मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका प्रमुखका उमेदवार तथा निवर्तमान प्रमुख अरुण साहले २२१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
मोरङका ११ पालिकामा मतगणना सुरु
मोरङ जिल्लामा रहेको १७ पालिकामा शुक्रबार सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमध्ये ११ पालिकामा मतगणना सुरु भएको छ । मोरङको बेलबारी, उर्लाबारी, रङ्गेली, सुनवर्षी र लेटाङ नगरपालिकामा मतगणना सुरु भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लेवन कश्यप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी जहदा, धनपालथान, ग्रामथान, कटहरी, कानेपोखरी र मिक्लाजुङमा पनि मतगणना सुरु भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको मतगणना भने केहीबेरपछि सुरु गर्ने तयारी भइरहेको मुख्य निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी होमबहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकामा एक लाख ३३ हजार १४२ मतदाता रहेकामा ८९ हजार ६७८ (६७ दशमलव ३५ प्रतिशत) मतदान भएको थियो ।